တာ့လီမခန်းသဲကန္တာရကြီးတွင် ရှားရှားပါးပါးမိုးရွာသွန်း - Xinhua News Agency
ရှင်းကျန်း၊ ဇွန် ၁၅ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ ရှင်းကျန်းဝေဂါ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွင်တည်ရှိသည့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံး တာ့လီမခန်း သဲကန္တာရတွင် ပြီးခဲ့သည့် သောကြာနေ့မှ တနင်္ဂနွေနေ့အထိ နှစ်ရက်ဆက်တိုက်မိုးရွာသွန်းခဲ့သည်။
တာ့လီမခန်းရှိ တာ့ကျုန်းမိုးလေဝသ စခန်း၌ ယခုနှစ်အတွင်း စုစုပေါင်းမိုးရွာသွန်းမှု ၄၀.၁ မီလီမီတာ (၁.၅၈လက်မ) ရှိခဲ့ရာ နှစ်စဉ်မိုးရွာသွန်းမှု၏ ၁.၅ ဆ ရှိကြောင်းသိရသည်။
မေလ ၁၄ ရက်တွင် မိုးရွာသွန်းမှုမှာ ၃၄ မီလီမီတာ (၁.၃၄လက်မ) အထိ မြင့်တက်ခဲ့သည်။
အလွန်ပူပြင်းခြောက်သွေ့သည့် ရာသီဥတု ရှိသည့် တာ့ကျုန်း‌ဒေသတွင် နှစ်စဉ် မိုးရွာသွန်းမှု မှာ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ၃.၉ မီလီမီတာ (၀.၁၅လက်မ) ရှိခဲ့ရာ ဆယ်စုနှစ် ၂ ခုအတွင်း အနည်းဆုံးမိုးရွာသွန်းမှုဖြစ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ (Xinhua)
## #XinjiangUygurAutonomousRegion # #Myanmar #Xinhua # #တာ့လီမခန်းသဲကန္တာရ #မိုးရွာသွန်း #ရှင်းကျန်း #တရုတ် #မြန်မာ #ဆင်ဟွာ #ဆင်ဟွာမြန်မာ
GLOBALink | Taklimakan desert receives rare rainfalls
China’s largest desert, the Taklimakan, northwest China’s Xinjiang Uygur Autonomous Region, experienced two consecutive rainfalls on Friday and Sunday.
The meteorological station in Tazhong, in the hinterland of the Taklimakan, has recordedatotal of 40.1 millimeters (1.58 inches) of precipitation this year, 1.5 times of the average annual rainfall.
The precipitation on May 14 was as high as 34 millimeters (1.34 inches).
With an extremely hot and dry climate, Tazhong area only received an annual rainfall of 3.9 millimeters (0.15 inches) last year, the least in the past two decades.